I-Silicone eNgcwele yezoLimo yokuSasazwa kweNdawo yeZolimo i-SILIA-2001 yeFektri kunye nePricelist | I-Honneur
I-Silicone yoLimo yokuSasaza iArhente yezoLimo i-SILIA-2001
I-SILIA-2001 ye-Silicone yokuSasaza kweLimo kunye ne-Wetting Agent
Ukudibana okungaphezulu （25 ℃, 0,0%, mN / m）: <21
SILIA-2001 Ukulima i-Silicone yokuSasaza kunye neArhente yokuKhanya
yinto eguquliweyo ye-polyether trisiloxane kunye nohlobo lwe-silione survivant enobuchule obukhulu bokusasaza kunye nokungena. Yenza ukuba uxinzelelo lomphezulu wamanzi lube sezantsi uye kuma-20.5mN / m kwi-0.1% (wt.). Emva komxube kunye nesisombululo sokubulala izitshabalalisi kwisilinganiselo esithile, inokuthoba ingelosi yokudibana phakathi kwesitshizi kunye namagqabi, enokuthi yandise isigqubuthelo sokutshiza. Ngaphaya koko, i-SILIA-2001 ye-Silicone yezoLimo
Ukusasazeka kunye nokungena kwiAntelligent kunokwenza ukuba iyeza lokubulala izitshabalalisi lifakwe kwisityatal samagqabi, isebenzayo ekuphuculeni ukusebenza ngokukuko, ukunciphisa inani lokubulala izitshabalalisi, ukonga iindleko, ukunciphisa ukungcoliseka kwendalo okubangelwa zizitshabalalisi zezitshabalalisi.
Ention Umgangatho ophantsi womhlaba
Indawo ephezulu yefu
 Ukunciphisa umthamo we-arhente yokutshiza yesifo.
 Ukunyusa ukhuselo lweeMichemicals
Inkangeleko enemibala ngaphandle kokukhanya kwe-amber yolwelo
Ukubonelela （25 ℃, mm2 / s） 25-50
Ukudibana okungaphezulu （25 ℃, 0,1%, mN / m） <21
Ubunzima （25 ℃） 1.01 01 1.03g / cm3
Inqaku lefu （1% wt, ℃） <10 ℃
Isetyenziswe njengesixhobo sokutshiza: I-SILIA-2001 inokunyusa ukogquma iarhente yokutshiza, Vpromote the
Ukuthatha kunye nokunciphisa umthamo wommeli wokutshiza. I-SILIA-2009 yeyona isebenzayo xa
(ii) alungiselele umxube wokutshiza kwangoko
Sebenzisa okanye ngaphakathi kwe-24h ukulungiswa.
Isetyenziselwe ukutshiza okuxutywe kwidrum
Ngokubanzi, yongeza i-SILIA-2001 (4000times) 5g kwipesenti nganye ye-20kg. Ukuba ifuna ukukhuthaza i-adsorption yenkqubo yokubulala izitshabalalisi, yonyusa umsebenzi wokubulala izitshabalalisi okanye ukunciphisa inani lokutshiza ngaphezulu, kuya kufuneka yongeze inani lokusetyenziswa ngokufanelekileyo. Ngokubanzi, imali yile ilandelayo:
Ukutyala kuphakamisa ulawulo lwe-0.025% ～ 0.05%
I-Herbicide 0.025% ～ 0.15%
Isibulala-zinambuzane ngu-0.025% ～ 0.1%
Intsholongwane 0.015% ～ 0.05%
Isichumisi kunye nesixhobo sokulandela umkhondo i-0.015 ～ 0.1%
Xa usebenzisa, qala ngokunyibilikisa isibulala-zinambuzane, yongeza i-SILIA-2001 emva komxube ofanayo wamanzi angama-80, emva koko wongeza amanzi kwi-100% uze uwaxube ngokwahlukeneyo. Kucetyiswa ukuba xa usebenzisa i-Agricola Silicone Ukusasaza kunye nokufikelela kwiArhente yokuHamba, isixa samanzi sehlisiwe saya kwi-1/2 yesiqhelo (kucetyiswa) okanye 2/3, ukusetyenziswa okuqhelekileyo kwesibulala-zinambuzane kuncitshisiwe ukuya kuma-70-80% eqhelekileyo. Usebenzisa iapezu encinci yeaperture iya kukhawulezisa isantya sokutshiza
I-200Kg, i-1000Kg, okanye isitya seplastiki se-20Kg, okanye ukuya kwisicelo sabathengi.
Ukugcina kunye nobomi beshelufu
Xa igcinwe kwiphakheji yayo yoqobo kubushushu obuphakathi kwe-20 ° C no-50 ° C,
I-SILIA-2001 ingagcinwa ukuya kuthi ga kwiinyanga ezili-12 ukusuka kumhla wokuvelisa (umhla wokuphelelwa).
Thobela imiyalelo yogcino kunye nomhla wokuphelelwa ophawulwe kwiphakheji. Edlulileyo kulo mhla, I-Shanghai Honneur Tech ayisayi kuqinisekisa ukuba imveliso iyahlangabezana neenkcazo zentengiso.
Edlulileyo: Ukuthambisa ngeoyile eyahlukeneyo yokuthambisa
Okulandelayo: I-Silicone yoLimo yokuSasaza iArhente yezoLimo i-SILIA2008